Spandex Latex dia lamba mitambatra sarimihetsika latina, izay novolavolain'ny orinasa tsy miankina. Izy io dia mandray teknolojia nano-composite. Manana elastika avo amin'ny lafiny efatra izy, tsy mora vaky, tsy mandray rano, ary manana ny asan'ny hatsembohana amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana. Ny vokany tery ...Hamaky bebe kokoa »
Mpanamboatra loharano ivotoerana Indostria sy fampidirana varotra B2B Mpanamboatra matanjaka, fiaraha-miasa manerantany famatsiana sisintany, fandefasana entana manerantany (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX) Fanamboarana takelaka solosaina, famolavolana tany am-boalohany, fandriana fanapahana solosaina, fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra sy fanaterana, serivisy ho an'ny mpanjifa .. .Hamaky bebe kokoa »
Ny orinasanay dia orinasam-panompoana tokana mijanona amin'ny fampiroboroboana ny lamba, ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana ary ny varotra. Ny vokatra lehibe dia mampiasa fikarohana tsy miankina sy fampandrosoana ny lamba, toy ny latabatra spandex (ambonin'ny solika / ambonin'ilay fitaratra), amin'ny fampiasana kofehy vita amin'ny nylon vita amin'ny kofehy, ny lamba dia enviro ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Aug-14-2020
1.Momba ny orinasanay Ny orinasanay dia orinasam-panompoana tokana mijanona amin'ny fampiroboroboana ny lamba, ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana ary ny varotra. Ny vokatra lehibe dia mampiasa fikarohana tsy miankina sy fampandrosoana ny lamba, toy ny spandex latex (solika ambonin'ny / fitaratra ambonin'ny), mampiasa w ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Apr-23-2020
Amin'izao fotoana izao, noho ny fipoahan'ny coronavirus vaovao any Shina sy manerantany, dia miahiahy mafy momba izany ny orinasanay. Miorina amin'ny traikefa anananay nandritra ny taona maro tamin'ny famokarana akanjo sy karazana fitafiana isan-karazany dia nanokatra tsipika famokarana roa izahay ho an'ny akanjo fiarovana sy sarontava. Ny ...Hamaky bebe kokoa »
Taorian'ny traikefa nandritra ny folo taona mahery, dia nanatsara ny kinova fanavaozana ny rafitra fanaovana takelaka CAD izahay. Izy io dia rindrambaiko ho an'ny fanaovana takelaka solosaina akanjo, fanaovana kaody ary fametrahana. Izy io dia rafitra CAD akanjo vaovao sy feno endrika. Ity rafitra ity dia mety kokoa amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Taorian'ny ezaka nataontsika hatrany dia nihoatra ny 1 tapitrisa dolara amerikana ny habetsaky ny varotra varotra latabatra spandex natondrantsika tany amin'ny tsena eropeana sy amerikana. Famakiana vaovao eo amin'ny tantaran'ny varotra ity. Hanohy ny fanatsarana sy fanatsarana ny vokatray izahay mba hampalaza kokoa ny vokatray. ...Hamaky bebe kokoa »